Nosy maitso rahoviana? | NewsMada
Nosy maitso rahoviana?
Hanomboka amin’ny fomba ofisialy, ny alahady izao, ny fambolen-kazo amin’ity taona ity. Raha ny voalaza, zana-kazo 60 tapitrisa no kasaina hatsatoka amin’izany. Tsy anavahana fa heverina fa ny rehetra mihitsy no tokony handray anjara satria efa iainana ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetr’andro sy ny fahasimban’ny tontolo manodidina.
Izao ny olana, raha nahomby ity resaka voly hazo ity izay efa nataon’ny fitondrana nifandimby ho zava-dehibe sy laharam-pahamehana, angamba efa mba nitombo ny velaran-tany voarakotra ala. Matetika mantsy zary lasa fisehoana ivelany ny raharaha. Mandao kely ny birao feno sorisory sy asa miavosa ny rehetra, mankeny ambanivohitra mifoka rivotra madio. Atao zara raha vita ny adidy ka maro no tsy mahavanona akory. Vitsy rahateo ny fikambanana na olon-tsotra na orinasa namboly hazo manara-maso ny fivoaran’ny zana-kazo natsatoka.
Firy tamin’ireo zana-kazo novolena ary no naniry araka izay nantenaina? Tsy lazaina intsony ny doro tanety izay efa hita ny voka-dratsiny saingy toa tsy resy lahatra ireo mpankafy azy ity. Ao koa ireo mpifindra monina misisika hitrandraka harena ao anaty valan-javabohary voaaro. “Ny fitadiavana mahazaka maniraka”, hoy isika Malagasy. Sarotra ny hanakana olo-mahantra tsy hitady izay mba mety hanavotra ny fiainany sy ny fianakaviany. Ny hanina anio tadiavina anio, ka atao akory ny hilaza amin’izy ireo hoe aoka isika hitsinjo ny hoavy fa miharatsy izao zava-misy izao ka ny taranaka fara mandimby no handova tany efitra sy karakaina. Tsy azo odian-tsy hita ny famokarana arina fandrehitra sy kitay izay manapotika ny ala sisa mijoro. Ny entona fandrehitra anefa lavo vidy izaitsizy. Koa noho ireo antony voalaza ireo, mila tetika maty paika mihitsy ny resaka angovo fa tsy atao resaka ambony latabatra fotsiny. Mbola mifikitra amin’ny fiarovana ny tontolo iainany ve ny Malagasy sa efa tsy te hahalala ny ampitso intsony fa ny androany aloha no mahamaika azy? Asa lahy?